I-Syngenta Archives - I-US Ilungele Ukwazi
Ukuze uqhubeke nokufunda
Izibopho zikaGeoffrey Kabat kumaQembu Wezimboni Zikagwayi Namakhemikhali
Posted on Mashi 7, 2019 by UStacy Malkan
UGeoffrey Kabat, PhD, ungudokotela wezifo zomdlavuza futhi ungumbhali wababili izincwadi bethi lezo zingozi zezempilo zemithi yokubulala izinambuzane, amasimu kagesi, intuthu kagwayi kagwayi nokunye ukuvezwa kwemvelo “kweqiwe kakhulu. ” Uvame ukucashunwa emaphephandabeni njengesazi esizimele sengozi yomdlavuza. Izintatheli ezisebenzisa uDkt Kabat njengomthombo kufanele zazi (futhi ziveze) ubudlelwane bakhe obude nomkhakha kagwayi nokuzibandakanya namaqembu asebenzisana nemboni yamakhemikhali emikhankasweni ye-PR kanye nokunxenxa imikhankaso.
Umholi weqembu langaphambili nomeluleki
UDkt Kabat uyilungu le- ibhodi labaqondisi we-Science Literacy Project, iqembu labazali le- IGenetic Literacy Project, esebenza ekusithekeni neMonsanto ukukhuthaza nokuvikela imikhiqizo yezolimo. UDkt Kabat ubuye abe yilungu le- ibhodi labeluleki besayensi we Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo (ACSH), iqembu lelo uthola uxhaso kusuka izinkampani zamakhemikhali, ugwayi nezemithi.
Kokubili i-Genetic Literacy Project ne-ACSH bahlanganyele neMonsanto emkhankasweni wobudlelwano bomphakathi ukuzama ukudicilela phansi i-International Agency for Research on Cancer (IARC) ngombiko wayo wokuthi i-glyphosate, isithako esiyinhloko se-Roundup herbicide kaMonsanto, ingumdlavuza womuntu ongaba khona. Ngokwamadokhumende akhishwe ngecala:
Uhlelo lweMonsanto PR (Febhuwari 2015) wabiza i-Genetic Literacy Project phakathi kwe- "Abalingani bemboni" IMonsanto ihlele ukuzibandakanya emizameni yayo "yokwehlisa umthelela" wombiko we-IARC. Izinhloso zohlelo lukaMonsanto bekuwukuvikela “idumela kanye ne-FTO ye-Roundup” futhi “nokuhlinzeka ngezembozo kuma-ejensi alawulayo…” I-GLP selokhu yathumela ngaphezu kwama-200 athikili egxeka i-ejensi yomdlavuza.
Ama-imeyili asuka kuFebhuwari 2015 khombisa ukuthi iMonsanto ixhaswe yi-ACSH ngokuqhubekayo futhi ifinyelela ekunikezeni i-ACSH "uhlu olugcwele" lolwazi lweMonsanto mayelana nombiko we-IARC we-glyphosate. Kuma-imeyili, abasebenzi bakwaMonsanto baxoxa ngokubaluleka kwezinto ze-ACSH kumuthi wokubulala izinambuzane, kanti omunye wabhala, "NGEKE UTHOLE UKUBALULEKA OKUNGCONO KWEDOLOLO LAKHO kune-ACSH." (kugcizelelwa koqobo)
Abasebenzi be-ACSH batshele uMonsanto ukuthi umbiko we-IARC glyphosate wawuse-radar yabo, base bephawula, “Siyabandakanyeka emaphephandabeni agcwele enkantolo: IARC, maqondana namakhemikhali e-ag, i-DINP [phthalate] nedizili.”
La maqembu asebenzise imilayezo efanayo ukuhlasela abacwaningi bomdlavuza be-IARC njengo “ukukhwabanisa kwesayensi"Futhi"izindawo eziphikisana namakhemikhali”Ngubani“ oqambe amanga ”futhi“bakhela uzungu lokumelela kabi”Isayensi ku-glyphosate. Bacaphuna uDkt Kabat njengo umthombo wokhiye ngezimangalo zokuthi i-IARC "idicilelwe phansi" futhi "ama-enviro-fanatic kuphela”Unake imibiko ngengozi yomdlavuza. UDkt. Kabat ubhale ukuthi “kukhona ngokoqobo azisekho izifundo esingakwenza ukukhombisa ukuthi i-glyphosate iphephile, ”ngokususelwa ku interview nochwepheshe ongaziwa.
Ukuhlasela ososayensi abaphakamisa ukukhathazeka ngomdlavuza
Esinye isibonelo sendlela uDkt Kabat asiza ngayo amaqembu axhunywe yiMonsanto emizamweni yakhe yokuhlambalaza iqembu elihlukile lososayensi abaphakamise ukukhathazeka ngomdlavuza nge-glyphosate ngoFebhuwari 2019 ukuhlaziywa kwe-meta. Ukuhlaziywa kwe-meta, okubhalwe ngokubambisana ngabososayensi abathathu abachwethezwe yi-EPA ukuze basebenze ekomidini lobuchwepheshe labeluleki besayensi le-glyphosate, kubike "izixhumanisi eziphoqayo" phakathi kokuvezwa kwama-herbicides asuselwa ku-glyphosate kanye nengozi eyengeziwe ye-non-Hodgkin lymphoma.
UDkt. Kabat uphenye ukuhlaziywa ku-athikili eyashicilelwa okokuqala kuForbes kodwa kamuva isusiwe ngemuva kokuthi abahleli beForbes bathole izikhalazo ngokungadalulwa kukaKabat mayelana nobudlelwano bakhe ne-ACSH. Ngesikhathi ebuzwa ngalolu daba, iForbes ithe le ndatshana yadonswa ngoba yephula imigomo yeForbes kanti uKabat ngeke esaba negalelo kwiForbes.
I-athikili kaDkt Kabat esusiwe ye-Forbes isengaba njalo funda kwiSayensi 2.0, a iwebhusayithi ephethwe ngumqondisi wangaphambili we-ACSH, futhi inguqulo ivela ku-Genetic Literacy Project. Umqondisi Omkhulu we-GLP uJon Entine uphakamise udaba lukaDkt Kabat kanye neziphakamiso okungenzeka ukuthi ososayensi bazenzile “ukukhwabanisa ngamabomu. "
UJon Entine tweet. I-Entine nayo iboshelwe ku- Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo. Ngo-2011, ngenkathi kunjalo ethola izimali ezivela eSyngenta, ACSH kushicilelwe incwadi ka-Entine evikela i-atrazine, isibulala-zinambuzane esenziwe yi-Syngenta.
Ukuthola eminye imininingwane ngokuhlaselwa okwenziwe umkhakha ku-IARC, bona:
Imibhalo Eyimfihlo Idalula Impi kaMonsanto Ngososayensi Bomdlavuza, nguStacy Malkan, TruthOut (7.16.18)
IMonsanto Ithembele Kulaba 'Ozakwethu' Ukuhlasela Ososayensi Abaphezulu Bomdlavuza, Ishidi lamaqiniso le-USRTK
Izibopho zikaDkt Kabat zesikhathi eside
UDkt. Kabat ushicilele amaphepha amaningana awathandayo embonini kagwayi axhaswe imboni kagwayi. Yena nombhali-mbhali wakhe kwamanye ala maphepha, uJames Enstrom (umphathiswa we-American Council on Science and Health), banokuxhumana okude embonini kagwayi, ngokusho kwephepha lika-2005 leBMJ Tobacco Control.
Ngo-2003 ocashunwe kabanzi iphepha kwaBMJ, Kabat nase-Enstrom baphethe ngokuthi intuthu kagwayi ayikhuphuli amathuba omdlavuza wamaphaphu nesifo senhliziyo. Ucwaningo beluxhaswe ngokwengxenye yiCentre for Indoor Air Research (CIAR), okuyiqembu lomkhakha kagwayi. Yize leyo mali yadalulwa, ukuhlaziywa okulandelayo ku Ukulawulwa Kogwayi weBMJ ibike ukuthi ukudalulwa okuhlinzekwe nguKabat no-Enstrom, yize behlangabezana nezindinganiso zale magazini, “akuzange kunikeze umfundi isithombe esiphelele sokubandakanyeka kwemboni kagwayi nababhali bezocwaningo. Imibhalo embonini kagwayi yembula ukuthi ababhali bebenesikhathi eside besebenzisana ngokwezimali nakwezinye izinto abasebenzisana nazo nemboni kagwayi. ”
I-Enstrom iziphikisile lezi zimangalo ku- I-athikili ka-2007 ku-Epidemiological Perspectives and Innovation, ephikisa ngokuthi ukuxhaswa kwakhe nokuncintisana kwakhe kwachazwa ngokusobala nangendlela efanele ephepheni leBMJ lango-2003, nokuthi imali yezimboni zikagwayi ayizange ibe nomthelela ocwaningweni lwakhe. "Kuze kube manje, akukho okungahambi ngendlela, ukwenzelela noma ukungenzi okuthile okutholakele ohlelweni lokubuyekeza futhi akukho phutha emiphumeleni ekhonjwe ephepheni," kusho u-Enstrom. IYunivesithi yaseCalifornia ayikuvimbeli ukuxhaswa kwabacwaningi embonini kagwayi kodwa manje kwenqabela abacwaningi ukuthi bangaceli imali embonini kagwayi.
Ukuxhumana kwezezimali embonini kagwayi kubikwe ephepheni leBMJ Tobacco Control kufaka phakathi:
Ngo-2019, usesho lwe- UGeoffrey Kabat Emibhalweni Yezimboni Zogwayi ye-UCSF uletha amadokhumende angaphezu kuka-800, kufaka phakathi i- Irisidi ka-2007 eya kuPhillip Morris ngemali engaphezulu kwama- $ 20,000 350 “yokubonisana ngemiphumela yempilo kagwayi ongaphakeme” ekhokhiswa ngo- $ XNUMX ngehora.
Ngo-2008, uKabat no-Enstrom bashicilela i- iphepha okuxhaswe kancane nguPhillip Morris ebika ukuthi ukuhlolwa kwangaphambilini kubukeka sengathi kudlulise amandla wenhlangano phakathi kwentuthu kagwayi wezemvelo kanye nesifo senhliziyo.
Ngo-2012, uDkt. Kabat ubhalile a iphepha ukuthola ukuthi osikilidi abasebenza ngophethiloli babengeyona ingxenye ebalulekile yomdlavuza wokuqunjelwa. Kulelo phepha, uDkt. Kabat uthe "ubesebenza njengomxhumanisi enkampanini yabameli nasenkampanini ebonisana ngemiphumela yempilo kagwayi wama-menthol."
Ngeminye imininingwane evela e-US Right to Know ngamaqembu angaphambili kanye nezifundiswa ezinamaqhina angadalulwanga ezinkampanini zokudla nezamakhemikhali, bheka I-Pesticide Industry Propaganda Tracker.
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane ACSH, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, atrazine, Isikhungo Sokucwaninga Kwasemoyeni, I-CIAR, Forbes, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGeoffrey Kabat, glyphosate, IARC, UJames Enstrom, UJon Entine, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, Phillip Morris, Isayensi 2.0, Iphrojekthi Yezesayensi Yokufunda, Syngenta